Heegan Sports Club Oo guul daro Kala Kulantay Kooxda Proline FC %
By Ramzi Yare	 On Jul 9, 2019
Kooxaha kubabdda cagta Heegan iyo Proline FC ayaa wada dheelay kulamadoodii 2-aad tartanka kooxaha bariga iyo bratamaha Afrika 2019,kaas oo ka dhacaya Rwanda.
Labada koox ayaa kulamadoodii 1-aad guul darooyin kala kulmay kooxaha kala ah Green Eegles iyo Apr,Heegan oo ka socota dalkeena ciyaartii kowaad waxaa looga badiyay 2-0,halka kooxda Proline FC iyadana 1-0 loogu badiyay.
Kulan labada koox ay kuwada ciyaareen garoonka caasimada Rwanda ee Kigali Stadium ayaa xiddigaha Heegan Sports Clubn waxaa lagoo badiyay 2-0 oo ay guusha ku qaateen xidigaha Proline FC ee ka dhisan dalka Uganda.
Kooxda Heegan Sports Club ayaa Amina Amase oo u dhashay dalka Ghana u magacaabay macallinkkeda 1-aad waxaana kooxda tan iyo markii ay iska dirtay Robert Mayanj hogaaminayay tababare Cusmaan Yuusuf Cusmaan.
Waan ka xunahay guul dararada 2-aad ee inaga soo gaartay tartanka Cecafa,sababtana waa ciyaaryaha aan dheelayno oo isku xig xiga,raalin gelin ayaa siinaynaa taageerayaasha kooxdeena”waxaa sidaas ku waramay goolhayaha Heegan Sports Club Mustapha Nakuja.
Naadiga Heegan ayaa waxaa u haray hal kulan oo tartanka Cecafa waxayna 11-July 2019 la dheelidoontaa xidigaha Apr FC oo ka dhisan dalka tartankan marta gelinaya ee Rwanda.
Wareega16-ka Koobka Qarammada Qaaradda Afrika oo la soo gaba gabeeyay